Momba anay - Fujian AoBoZi Technology Co., Ltd.
Niorina tamin'ny taona 2005 tany Fujian, Sina, ny orinasanay dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny R&D, famokarana, fivarotana ary serivisy fanararaotana fanontana mifanaraka aminy. Izahay no mpanamboatra sy mpitarika manam-pahaizana indrindra amin'ny sehatry ny Epson, Canon, HP, Roland, Mimaki, Mutoh, Ricoh, Brother, ary marika malaza hafa manam-pahaizana manokana momba ny.
➢ Inkjet Printer Ink toy ny sublimation ink, pigment ink, dye ink, dtg ink, uv ink, eco solvent ink, solvent ink sns;
➢ Samy hafa ny haben'ny mpanonta inkjet Epson, toy ny haben'ny A3 A4, 61cm ary 111cm ny haben'ny fanontana;
➢ Tsela-pifidianana tsy azo esorina (ranomainty vita amin'ny fifidianana nitrate volafotsy) ary marika tsy azo esorina izay nampiasaina ho an'ny Parlemanta na Filoham-pirenena Fifidianana any Afrika sy firenena any Azia izay manana kalitao sy vidiny tsara no tena tanjontsika;
➢ Penina toy ny ranomainty penitra fotsy, ranomainty penina, setran'ny ranomainty pen, ranomainty alikaola izay ampiasaina amin'ny karazana famenon'ny penina rehetra;
➢ TIJ2.5 Coding sy fanamarihana toy ny fanaovana pirinty kaody, ranomainty sy solvent solika, cartridge an'ny ranomainty miorina sy solvent miorina amin'ny pirinty barcode;
Rehefa dinihina tokoa, tsy manome inks fotsiny isika, fa mamolavola vahaolana namboarina izay mifanitsy tsara amin'ny zavatra takinao sy ireo an'ny mpanjifanao ary manome serivisy feno an'ny OEM miaraka amin'ny marika ho an'ny tsena anatiny sy ivelany. Ny tanjakay vaovao dia mitoetra amin'ny fampandrosoana ny fanontam-pirinty ho an'ny vahaolana fanontana, ary koa amin'ny akora, teknolojia ary fampiharana. Midika izany fa azo apetraka eny an-tsena avy hatrany ny vokatra vao novolavolaina.
Mijanona ho zava-baovao sy mahaliana hatrany izahay na dia aorian'ny dingana fampandrosoana aza. Ny rafi-modular miavaka sy malefaka dia mamela anay hanatanteraka ny fanirianao tsirairay. Manaraka an'io izahay amin'ny alàlan'ny fanohanana anao eo amin'ny tranokala hanatsarana ny fizotranao ary hiantohana ny fandefasana azo antoka sy haingana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra logistikika miasa tanteraka.
Ireo mpiasa be fanoloran-tena natokana ho anao dia hanohana anao amin'ny dingana rehetra amin'ilay tetik'asa ary ho azonao antoka fa ho voavaly haingana ny fanontanianao ary ampiharina amin'ny fomba mahomby ny fanirianao. Obooc miaraka amina fonosana feno vahaolana ho an'ny tsirairay no mahatonga ny fahasamihafana ary hahalala bebe kokoa momba ny karazana vahaolana mahasoa sy arahin'antoka rehetra dia tena hahomby aminao.
Manampy anao amin'ny filanao rehetra ny mpikambana ao aminay. Tsy mihevi-tena ho mpanamboatra ranomainty tsotra akory izahay fa mpiara-miasa aminao azo antoka. Anisan'izany ny famokarana inks avo lenta ary fandaminana ny fandefasana azy ireo aminao ary koa ny fanomezana fanohanana ara-teknika namboarina. Manome ny vahaolana ara-toekarena indrindra izahay mandritra ny rojom-bidinao rehetra.
1. Amin'ny maha ISO9001 sy ISO14001 mpanamboatra voamarina, ny fahamarinan-tsika fanamafisam-peo no tsara indrindra any Shina, eken'ny mpanjifa sy ny mpifaninana ao Sina.
2. apetraka ny volan'ny varotra.
3. Ny governemanta Philippines dia mifidy antsika ho iray amin'ireo mpamatsy ranomainty.
4. Azontsika atao ny manaiky ny orinasan'ny ranomainty OEM.
5. Izahay no mpamatsy ranomainty azo itokisana ho an'ny mpanamboatra cartridge Taiwan.
Tsipika ny vokatra
1. Ranomainty be
2. Mameno ranomainty sy ranomainty kit
3. kojakoja CISS sy CISS
4. Cartridges mifanentana
5. Fanontana printy iray manontolo sy ny kojakoja ilaina aminy
6. Ranomainty manokana, toy ny ranomainty tsy azo foanana
Manantena ny hamorona tsara tarehy rahampitso miaraka aminao izahay.